﻿Côte d’Ivoire : Azo Hamarinina Ve Ny Fahatsiarovan’ireo Mpomba An’i Gbagbo Ny Fahiny? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Septambra 2016 12:19 GMT
Na izany aza, teo ambanin'ny rivotry ny fanoherana ny mpanjanaka, nandritra ny fitondrana Gbagbo (2000 – 2011), vetivety dia nivadika ho fanomezana tombon-dahiny foko iray sy fampiroboroboana faritra ilay politika fanafahana napetraka ho arahana. Araka izany, ny Human Rights Watch dia nanameloka fanararaotam-pahefana tamin'ny fampiasàna ny fotokevitra ara-poko sy ny maha-olompirenena mba hanaovana tsinontsinona ny ampahany betsaka amin'ny vahoaka. Teraka ilay « article 125 » tsy ofisialy sady malaza ratsy, napetrak'ilay mpitarika ireo tanora mpomba an'i Gbagbo, Charles Blé Goudé. Ny tena votoatiny dia ny hitarihana ireo « tanora tia tanindrazana » hanenjika ireo izay ahiana ho mpanohitra, amin'ny fidarohana sy fandoroana velona azy ireny. Tsy ampy hamiliana ireo rehetra mpomba an'i Gbagbo hanome lamosina ny mpitarika azy ireo io trosanà herisetra io, ireo mpomba izay manohy hatrany ny filazàna hoe tsy rariny ny fisamborana azy sy ny famindràna azy hanatrika ny CPI any La Haye (miaraka amin'i Blé Goudé), ary tetika tsikombakomba novolavolain'i Frantsa mba hanilihana azy amin'ny tontolo politika ivoariana, hanomezana tombony an'i Alassane Ouattara izao.
Nahavita nandrakitra firoboroboana ambony tokoa teo anelanelan'ny 2012-2015 (9,3 %), ilain'i Côte d’Ivoire ny manohy an'izay diany izay, farafahakeliny hatramin'ny 2017, miaraka aminà fisondrotana 7 % isantaona, hoy ny fanontàna avy amin'ny Africa’s Pulse an'ny Banky Iraisampirenena. Ao Afrika, i Etiopia, Tanzania ary Mozambika sy Roandà irery ihany no afaka miteny betsaka momba izany. Mazava ho azy, resaka tarehimarika fotsiny io, ary anjaran'i Côte d’Ivoire izany ny manao izay hahatonga ny firoboroboany ho fifanotronan'ny rehetra bebe kokoa, mba hahita tombony amin'izany ireo vahoaka ivoariana, kanefa mampanahy ihany ny Tondron'ny Fivoaran'ny Isambatan'olona (IDH) ao amin'ny firenena. Na izany aza, soa fa mijanona ho tarehimarika fotsiny ihany ireny, vavolombelon'ny tena fiovàna tampoky ny toekarena sy ny fiarahamonina, raha ilay Côte d’Ivoire an'i Gbagbo kosa nilentika tamin'ny fomba mampidi-doza nankany amin'ny faharavàna. Izy ireny dia ampy hiampanga ilay endrika fifikirana fotsiny amin'ny antoko, fa tsy fitiavana tanindrazana, nasehon'ireo izay milaza fa i Ouattara dia tsy hafa fa saribakoly manatanteraka ny baikon'i Frantsa fotsiny, ary Gbagbo no tena mpanavotra ny firenena.